Iihotele ezineJacuzzi kwigumbi ihotele eBubbelBad
Ihotele eNtofontofo yabucala yeJacuzzi
Bhukisha ngoku, ndifuna vol = ivol
Jonga Amagumbi eJacuzzi >
Fletcher €25 actie 1, 2 ye 3 dagen (Tijdelijk!)
• 1, 2 ye 3 x uitgebreid ontbijt
• Gratis fiets- neendlela zokuhamba
Jonga kwi & Bhukisha ngoku >
✅ 2 UJacuzzi wobuqu
Su Royale Suite
>> Iinkcukacha ezithe xaxe
✅ Jonga kwaye ...
Ter Owakho Ter ...
Su Suite eNtofontofo
Ub Umgqomo oshushu
Iintengiso zeGumbi leJacuzzi
Ezi hotele zilandelayo zikhethiweyo zeFletcher ezinejacuzzi zinamagumbi ehotele kunye nezikhuselo ezinejacuzzi, i-whirlpool egumbini okanye i-whirlpool.
Ezi hotele zikwindawo entle kwaye kuhlala kukho indawo yokupaka yasimahla kunye ne-wifi yasimahla ekhoyo.
Cofa kwikhonkco lenye yeehotele ezingezantsi ukuya kwi-Fletcher Jacuzzi ekhethekileyo okanye kwi-Whirlpool kwigumbi elinikezela ngephepha..
Uya kuwabona ngoko nangoko amaxabiso, ukufumaneka kunye nolwazi oluthe kratya.
Fletcher Estate Ihotele Holthurnsche Hof
Amagumbi eJacuzzi eMantla Holland
Ikota ye-Nalet yaseFletcher yehotele
Fletcher Ihotele-Ivenkile yokutyela uJan van Scorel
I-Fletcher Ihotele-Indawo yokutyela iHeiloo
I-Fletcher Hotel-Indawo yokutyela iMarijke
I-Fletcher Ihotele-Indawo yokutyela iSpaarnwoude
I-Fletcher Ihotele-Ivenkile yokutyela iKoogerend.
Amagumbi eJacuzzi eMantla eBrabant
UFletcher Kloosterhotel uWillibrordhaeghe
Indawo yokutyela eTeugel Uden-Veghel
I-Fletcher Wellness-Ihotele eTrivium.
Amagumbi eJacuzzi eMzantsi Holland
I-Fletcher City Ihotele IHague
I-Fletcher Ihotele-Ivenkile yokutyela uCarlton.
Amagumbi eJacuzzi eZeeland
Ihotele iFletcher Zuiderduin Beach
I-Fletcher Hotel-Ivenkile yokutyela iDe Zeegser Duinen
UFletcher Wellness-Ihotele eDe Hunzebergen
Indawo yokutyela ihotele-Langewold.
I-Fletcher Hotel-Indawo yokutyela eAmersfoort
Amagumbi eJacuzzi eLimburg
I-Fletcher Ihotele-Indawo yokutyela iWeert
Fletcher Usapho Ihotele Paterswolde
IFletcher Ihotele-Paleis Stadhouderlijk Hof
UFletcher uJacuzzi Kamers
Amagumbi ehotele ezithandana nejacuzzi yabucala evela kwityathanga elithandwayo lehotele UFletcher.
Jonga iiNkonzo >
Iihotele.nl Amagumbi eJacuzzi
Olona khetho lufanelekileyo kumagumbi ehotele Iihotele.nl.
Amagumbi evan van Valk Jacuzzi
Iintengiso zeHotel ezifihlakeleyo?
Ukuba ujonga olona lubonelelo lubalaseleyo, iingcebiso, amaqhinga kunye nezaphulelo eziyimfihlo zamagumbi ehotele eNetherlands, Nceda undwendwele indawo yethu yodade SecretHotelDeals.nl >>
Iindawo ezikhethekileyo zeFletcher Jacuzzi Suites
Ihotele iFletcher yadibana neJacuzzi, Tub eshushu okanye iWhirlpool
Ubusazi Fletcher Iihotele ikwanamagumbi akhethekileyo ehotele kunye nee-suites ezineJacuzzi egumbini, ibhafu yokubhabha entle okanye i-whirlpool emnandi?
Phumla kunye nani nobabini kwigumbi lenu lesibini lezempilo kunye nejacuzzi egumbini, ezinye iisuti zinethala labucala okanye ibhalkhoni eneembono ezintle, Uqinisekisiwe ngokuhlala okhethekileyo ubusuku bonke.
Ihotele ene-jacuzzi egumbini elinendawo ebutofotofo kukuphumla okupheleleyo emva kweeveki zakho zomsebenzi oxakekileyo.
Amagumbi ethu acetyiswayo eFletcher Jacuzzi
Okanye ucofe kwiqhosha elingezantsi kwaye ujonge zonke izibonelelo ezivela ehotele iFletcher ngejacuzzi okanye i-whirlpool.
Jonga iihotele zeFletcher >
Iihotele kunye neSauna kunye neJacuzzi kwigumbi
I-Sauna yabucala kunye neJacuzzi egumbini: Ubunewunewu obunjalo!
Yiya kwelinye inyathelo, kunye nokubhukisha isuti esempilweni kwihotele yodidi ene-jacuzzi enkulu yabucala kunye ne-sauna yabucala kwigumbi lakho ngamava empilo entle ngaphandle kwabantu ongabaziyo.
Kukho namagumbi amahle ehotele anephuli yabucala kunye nejacuzzi enkulu engqukuva.
Cinezela iqhosha elingezantsi ngolwazi oluthe kratya kunye nokunikezelwa.
Fumanisa amagumbi eSauna >
Kwikhonkco lehotele elaziwayo iVan der Valk uya kufumana uninzi lweehotele zexabiso eliphezulu ezinejacuzzi ezinkulu zabucala kwigumbi, ibhafu yokubhabha entle, isauna, impilo nokuba nepuli yabucala egumbini lakho enejacuzzi enkulu ejikelezayo.
Cofa kwiqhosha elingezantsi kwaye ujonge okona kulungileyo van der Valk.
Jonga amagumbi eValk Valk >
Amagumbi eInntel Art kwiiJacuzzi
Iihotele ze-Inntel zaziwa ngokubhabha kwebhola, amagumbi e-whirlpool kunye nejacuzzi.
Eyona ndawo intle yokubhabha kwi 2021 Umzekelo, awuyi kuyifumana ilize Inntel Art Ihotele Eindhoven.
Cofa kwiqhosha elingezantsi kwaye ufumane le tyathanga ikhethekileyo inehotele enamagumbi amahle ehotele egxile kakhulu kwiJacuzzi kumagumbi nase spa / izibonelelo zempilo ehotele kunye neJacuzzi ye-Inntel.
Jonga iihotele zeInntel >
Ubusuku ngeTubhu eshushu
Ibhafu entle eshushu egumbini lakho, Apho nina nobabini ninokonwabela amanzi afudumeleyo!
La magumbi ehotele anokubakho okuncinci eNetherlands.
Jonga amagumbi ashushu eTub >
Uyibhukisha njani i-In-Room Jacuzzi eFletcher?
Igumbi elinokuboniswa kweVidiyo kaJacuzzi
Ngaba ukulungele impelaveki yothando kude??
Emva koko zivumele ukuba utofelwe kwi-jazuzzi yehotele okanye ibhafu eshushu egumbini.
Iihotele zihlala zikwabonelela ngeendlela ezahlukeneyo zempilo, ukuze uphumle ngokupheleleyo kwi-sauna yehotele okanye kwindawo yokuhlambela nge-steam ngexesha lokuhlala kwakho ehotele.
Phuma neqabane lakho nize nizinike ixesha lokuba nibe kunye.
Vumela loo hotele ize ne-jacuzzi yayo egumbini kunye nesidlo sakusasa esimnandi kusasa.
Ngamanye amaxesha kukho ihotele enephuli yabucala egumbini!
Kutheni ubhukisha igumbi lehotele elineJacuzzi yaBucala?
Khetha ihotele embindini wendalo ngeempelaveki eziphumlayo, okanye ubhukishe ihotele kwisixeko esiphithizelayo ukuze ukhululeke kwiJacuzzi emva kosuku lokuthenga.
Kwihotele ene-jacuzzi egumbini ungonwabela loo nto intwana yokunethezeka, eqinisekisa ukuphumla ngokupheleleyo.
Yonwabela usuku olukhulu kwindawo ejikeleze ihotele, ungcamle okona kutya kumnandi kwivenkile yokutyela kwaye uphumle ejacuzzi kwigumbi lakho lehotele.
Ngaba ubusazi ukuba kukwakho iisuti zokunethezeka ezinejacuzzi. Yipati leyo.
Jonga Onke Amagumbi eJacuzzi >
IVan der Valk Iihotele ngeBhafu yeBhafu, I-Whirlpool okanye iJacuzzi kwigumbi
Ngaba ujonge igumbi lasehotele elinamajacuzzi?
Emva koko ufike kwindawo efanelekileyo eVan der Valk.
Kwiihotele zethu ezininzi zinamagumbi akhethekileyo anejacuzzi.
Yonwabela ihotele ene-jacuzzi egumbini ngexabiso elifanelekileyo, i-whirlpool okanye ibhafu yokuhlambela?
Bhukisha indawo yokulala apha kwihotele ivan der Valk eneJacuzzi egumbini >
IIHOTELE EZINAMAGUMBI JACUZZI? NDINGABUFUMANA PHI?
Ngaba ujonge iJacuzzi yehotele ngaselwandle okanye eDe Veluwe??
Kwiwebhusayithi yethu kulula ukuyicoca kukhetho lwakho.
Ngale ndlela unokubonisa ukuba ufuna igumbi lasehotele elinamazantsi ejacuzzi.
Ngokusekwe kolu lwazi, zihotele kuphela ezinegumbi elingaphakathi egumbini okanye i-whirlpool.
Ngale ndlela ufumana umfanekiso ocacileyo wamagumbi ahlangabezana neemfuno zakho, njengegumbi lasehotele laseJacuzzi.
HLALELA EHOTELINI NEJACUZZI EGumbini
Inyosi UVan der Valk Siyaqonda ukuba kubaluleke kangakanani ukuphumla kunye nokuzola.
Kungenxa yoko le nto siphuhlise ifomula eyahlukileyo eye yaphunyezwa kuzo zonke iihotele zethu.
Ngale ndlela uhlala ubutofotofo kwaye ukhululekile kwaye siyaqinisekisa ukuba uyishiya ihotele yethu ngokukhululeka ngakumbi.
Uyakwazi uphumle ngokupheleleyo kwigumbi ehotele kunye Jacuzzi.
Yonwabela iJacuzzi yangasese kwigumbi lakho kwigumbi lakho lokulala, okanye usebenzise simahla izibonelelo zempilo entle ezifana ne-whirlpool, ipuli yokuqubha, ukufaneleka kwe-sauna.
UKUDLULA KONWABE KWIIHOTELA NEGUMBI JACUZZI
Ukongeza kwigumbi elithandwayo lehotele elinejacuzzi, zininzi ezinye iindlela zokonwabela intle (mini) ukonwabela iholide.
Enkosi kunxibelelwano lwethu olulungileyo kunye nezinto ezininzi ezinomdla kubakhenkethi kunye neenkampani, sinokukhetha okubanzi kweephakeji.
Umzekelo, uthini ngemini yokuphumla kwi-spa?
Okanye ungandwendwela isixeko esinembali okanye ipaki yokonwabisa?
Ihotele nganye ineephakeji ezahlukeneyo, ukuze wonwabe kuyo yonke indawo.
Jonga zonke iiNtengiso zeValk Valk >
BHUKA Igumbi lasehotele kunye neJacUZZIA
Xa ubuyela ehotele yethu nejacuzzi egumbini emva kosuku lokonwaba, ungathatha isihlalo ngqo kwindawo yokutyela.
Zonke iihotele zethu zinendawo yokutyela enemenyu ebanzi, ke kukho into yakhe wonke umntu.
Ewe ungabuyela kwigumbi lakho lehotele kunye nejacuzzi emva kwesidlo sangoku ukuze uphumle kwigumbi lakho lokunethezeka.
Ukuhlwa ngothando kunye nokuchitha ubusuku ehotele kunye nejacuzzi egumbini… akunakuba ngcono?
Kolu luhlu 10 sikhethe awona magumbi ehotele athambileyo anejacuzzi okanye i-whirlpool egumbini.
Yile ndlela uyonwabela kunye nomhlobo wakho okanye umhlobo osenyongweni(phakathi) yangokuhlwa ezolisayo!
IHOTELE KUNYE NEJACUZZI EGumbini - TOP 10
Sinento ephezulu 10 iihotele ezinamagumbi egumbi akhethiweyo.
Ewe kukho ukhetho olukhulu kakhulu kwiihotele ezahlukeneyo ezinejacuzzi.
Gcina eli phepha, njengoko siza kongeza iihotele rhoqo kunye nee-suites ngegumbi lasejacuzzi.
1. I-MAINPORT HOTEL-ROTTERDAM
Ixabiso elixabisekileyo kwaye linobunewunewu 5 * Ihotele iMainport eRotterdam yindawo entle onokuhlala kuyo kubusuku obutofotofo.
Amagumbi eehotele kwihotele iMainport anejacuzzi entle egumbini.
> Funda ngakumbi kwaye ujonge amaxabiso & ifumaneke
2. IVAN DER VALK MIDDELBURG - IHUBHU HOT & ISAUNA EGUMBINI
Iihotele zaseVan der Valk ngokuqinisekileyo ziyaziwa ngee suites ezintle kunye nejacuzzi egumbini.
I-Van der Valk ikwanayo 'ne-suite yezempilo' kunye nebhafu yokuhlambela, i-infrared sauna kunye neshawa kabini.
3. IIHOTELE ZE-INNTEL ART EINDHOVEN - EINDHOVEN
Awuhlali nje ubusuku kwigumbi loyilo elihle, kodwa phumla kwijacuzzi enkulu egumbini lakho.
Igumbi 'lobugcisa beJacuzzi' line-XL jacuzzi.
> jonga amaxabiso & ifumaneke
4. IHOTELE I-TOREN-AMSTERDAM - I-HOT TUB kwigumbi
Ihotele iToren ivotelwe njengeyona hotele ibalaseleyo eNetherlands kungabikho ngaphantsi kwamaxesha amane.
Amagumbi aphezulu athambileyo ane-whirlpool ephindwe kabini kwigumbi.
5. IHOTEL DE REHORST - EDE
Ihotele de Reehorst e-Ede inamagumbi aliqela ehotele anejacuzzi.
Umzekelo, khetha igumbi elinobunewunewu elinejacuzzi kunye nomabonakude we-cinema.
7. I-FLETCHER HOTEL LANGEWOLD - DRENTHE-HOT TUB / WHIRLPOOL EGUMBINI
Ihotele elungileyo iLangewold imi ehlathini.
Amagumbi ehotele ane-whirlpool emangalisayo okanye i-jacuzzi egumbini. Phola!
8. IVAN DER VALK EMMEN - AMAGUMBI AMAXABISO
Ngaba ukhetha iAfrika Suite, i-suite yaseHollywood okanye elinye lamagumbi anemixholo?
UVan der Valk Emmen unamagumbi amahle ehotele anejacuzzi kwigumbi okanye kwindawo evuthuzayo.
9. I-GRAND HOTEL IDIRAKI-IINTABA ZOKUSONDE
IGrand Hotel de Draak yeyona hotele indala eNetherlands, kodwa mhlawumbi yenye yezona hotele zikhululekile kweli lizwe. Ii 'Superior Suites' azintle kwaphela, kodwa ndinejacuzzi egumbini.
10. IHOTEL VILLA DE KLUGHTE - ISITHILI SOLWANDLE - 2 ABANTU UJACUZZI EGumbini
Ihotele iVilla de Klughte inendawo entle enembono elunxwemeni okanye iindunduma! Zombini ezi suites kunye namagumbi aphezulu ane 2 umntu ijacuzzi.
Yintoni ihotele enejacuzzi yabucala?
Vumela ukuba utofelwe ehotele yothando kunye nejacuzzi yayo.
Khawufane ucinge, kuphakathi ebusika, wena kunye nomntu omthandayo akukho ngeempelaveki.
Ungene nje ngaphakathi nangaphandle kwegadi entle, ijacuzzi entle yabucala efudumeleyo ilinde wena neqabane lakho.
Into ekufuneka uyenzile ukuvula ibhotile entle yamaqamza kwaye wonwabele uxolo, ukufudumala kunye nomnye nomnye.
Ukuba ukhetha ibhafu yendalo, emva koko ityhubhu eshushu eyenziwe ngomthi inokuba yinto kuwe.
Igumbi elinamajacuzzi abucala kwigumbi lakho lehotele ikwangumboniso obalaseleyo, ke akufuneki ushiye indlu.
Yintoni indleko yejacuzzi yabucala?
Ixabiso lejacuzzi labucala liphakathi kwe- € 79,00 kwi- € 704,00 phambi kwe 2 abantu ngobusuku ngabunye.
Ihotele inikezela ngamagumbi ane-whirlpool
Ngaba ungathanda igumbi lasehotele elinejacuzzi ngexesha lokuhlala kwakho okwethutyana kwilizwe lethu elihle?
Emva koko uhlala kwindawo efanelekileyo kwi-HotelBubbelBad.nl!
Kweli phepha uya kufumana ikakhulu iihotele, ezininzi okanye ezinye zixhotyiswe ngejacuzzi yabucala.
Ukuhlamba okumnandi ngokusondeleyo kunye nokusela kwihotele yaseDatshi oyikhethile.
Kwiimeko ezininzi ichaphazela igumbi lasehotele eliphambili kwi 3- okanye ihotele eneenkwenkwezi ezi-4 kwilizwe lakho.
Iindawo ezininzi zifumaneka kumantla omhlaba welizwe, apho unokuchitha khona ubusuku ngejacuzzi.
Ngaba uyokufumana amava okuba sempilweni ngokupheleleyo kwaye igumbi lehotele elinebhafu ayikonelanga, emva koko unokufuna ukuchitha ubusuku ehotele eqhelekileyo.
Ukulala okukhethekileyo kumagumbi ehotele anqabileyo
Sichitha ubusuku phantsi kobusuku obukhethekileyo bokuhlala ehotele kunye nejacuzzi egumbini.
Oku kunokwenzeka, umzekelo, kumaphondo aseDrenthe, Ngaphezulu, IGroningen, Utrecht kunye neLimburg.
Njani malunga negumbi lehotele ebizayo kwihotele encinci uHet Heerenhuys eRuinerwold eDrenthe, okanye igumbi eline-jacuzzi ephindwe kabini kwi-Groningen Hotel Resort Landgoed Westerlee?
IAlmelo kunye neLimburgs ezizalelwe eOverijssel zikwanazo neehotele ezithembisa ukubamnandi kwamabhola amabini.
Ngaba ufuna ukuhamba ngokukhawuleza kwaye ujonge igumbi lehotele elinamajuzuzi, jonga umnikelo wethu apha ngasentla kwaye ukhawuleze ukumothusa umntu omthandayo ngale ndlela ikhethekileyo yokuhlala ubusuku bonke!
Ngaba uyafuna ukonwabela amava okuthandana aphezulu okanye ujonge ihotele ethandana kakhulu nesiganeko esikhethekileyo sothando: Usuku lukaValentine okanye iminyaka emininzi yomtshato?
Ke igumbi lehotele elinejacuzzi ngumbono olungileyo!
Amagumbi ehotele anejacuzzi ahlala engawona magumbi aphezulu ehotele.
Ukongeza kwi-jacuzzi yabucala, ezi zixhotyiswe ngombhede wobukhulu benkosi kunye nefenitshala entle.
Kufuphi, Yonke into ikhona ukuze uhlale ngothando olukhulu. Apha ngezantsi kukho iifayile ze- 13 Amagumbi ehotele athandwa kakhulu anejacuzzi eNetherlands.
Ukukhangela igumbi lehotele elinamajacuzzi? Sincoma ezona hotele zibalaseleyo.
Ingcebiso! Ihotele de Wageningse Berg icetyiswa kakhulu! Okanye uthini malunga nekhaya leholide kunye nejacuzzi? Imnandi kwaye ininzi yabucala.
Ihotele Stadhouderlijkhof: 2 Suites zidibene nejacuzzi
Eyaziwayo kunye nokunethezeka Ihotele Stadhouderlijkhof ikumbindi weLeeuwarden.
Le yayiyibhotwe lenkulungwane ye-18 elinabazali basebukhosini, kodwa ngoku kuhlala iindwendwe ebhotwe. Kodwa umtsalane wasebukhosini usabonakala kuyo yonke indawo, bobabini kwindawo yokutyela, Kwiyadi yembali enethala kunye namagumbi ehotele afanelekileyo. Ngenxa yokuba ibhotwe langaphambili alikho ngaphantsi 2 iisuti ezinejacuzzi ezijikelezileyo kwaye ulala kwibhedi yokwenene eneeposta ezine! Ukufezekisa impelaveki yothando kude.
Ingcebiso! Bhukisha enye ye 2 iisuti ezinejacuzzi ezijikelezayo ngewebhusayithi esemthethweni yeFletcher Hotel Stadhouderlijkhof
Lala kwigumbi eliphezulu elinendawo yokuhlambela ebanzi.
Inkwenkwezi ye-4 Fletcher Ihotele Oss Idilesi entle entle ekufutshane neDen Bosch.
Ilungele ukuthenga, kodwa nendawo yokugcina indalo iDe Maashorst ikufuphi.
Apha ungajikeleza ngokungapheliyo kwaye uhambe.
Emva koko kuyamnandi ukubuyela ekhaya kwelinye lamagumbi ehotele aphucukileyo kwaye obutofotofo ehotele iOss!
Ngaba ujonge ubunewunewu obuphezulu?
Emva koko bhukisha igumbi eliphezulu ehotele ngejacuzzi, enefashoni yanamhlanje, unebhedi elingana nobukumkani, ibhafu enkulu kunye neshawa emnandi. Ukutya okulungileyo kunokwenzeka kwindawo yokutyela iBar Bistro DuCo.
Ingcebiso! Bhukisha indawo efanelekileyo yokuhlambela kunye neeshawa zemvula apha kwiwebhusayithi esemthethweni yeFletcher Hotel Oss
Igumbi lasehotele elinamajacuzzi: Ihotele Reehorst
Inkwenkwezi ye-4 Ihotele de Reehorst Inayo yonke into phantsi kophahla olunye: yeqonga lakho, yokutyela, ibar ofudumeleyo kunye nethala.
Uninzi lokuzonwabisa. Ukuba ujonga indawo kunye nendalo, indawo leyo igqibelele!
Ihotele de Reehorst ikumbindi wendalo entle yeVeluwe! Efanelekileyo!
Unokuphumla kwii-super-deluxe suites, Zonke zinejacuzzi entle.
Leliphi igumbi lehotele elinejacuzzi suite oyikhethayo: waseNew York, waseVenice, ukusuka Ibiza yeMillionaire Suite?
Yeyiphi 9 iisuti ezikhethiweyo nawe, ubunewunewu nothando buqinisekisiwe.
Kwasa ekuseni ungonwabela isidlo sakusasa esitofotofo kwindawo yokutyela eMiami. Uphengululo lweZoover lubalasele!
Jonga amaxabiso apha
Ukubhabha kwi-Wageningse Berg
Ngaba ujonge indawo entle entle phakathi kwendawo eluhlaza, emva koko sinokucebisa ngehotele de Wageningse Berg, ibekwe kwi-Wageningen Berg!
Ihotele inoyilo olukhethekileyo kwaye ngenxa yendawo ekuyo ngaphezulu kwe-Wageningse Berg uya kunyangwa ngombono omnandi ngaphezulu kwezikhukula kunye neBetuwe..
Unokulala kakuhle kumagumbi ehotele afanelekileyo kunye nejacuzzi, ungatya kwindawo yokutyela okanye kwi-brasserie.
Okanye kuthekani ngeziko lezeMpilo kunye nesunauna yaseFinland, Ibhafu yaseTurkey kunye neJacuzzi? Imnandi!
Ingcebiso! Bhukisha isuti etofotofo ngewebhusayithi esemthethweni yeHotele de Wageningse Berg
Ifunyenwe ngokuthe ngqo kwiGooimeer Ikota yekota yeFletcher.
Uyilo luphawu lwekota ye-Nautical.
Ihotele ijongeka ngakumbi njengelali yokuloba kunehotele! Izakhiwo ezahlukeneyo, yakhiwe kwimeko yolwandle, kunye yenza ihotele.
Kwisakhiwo esiphambili uya kufumana indawo yokutyela, ithala kunye newayini yokuphumla.
Amagumbi ehotele abekwe kwizakhiwo ezahlukeneyo.
Nazi (rhoqo) Amagumbi, kodwa unokukhetha iRoyal suite ngombono.
Eli gumbi linendawo yokuhlambela evulekileyo exhotyiswe ibhafu enkulu, iibhedi ezentofontofo kunye nembonakalo entle ngaphezulu kwe-Gooimeer.
Ingcebiso! Bhukisha isuti etofotofo ngewebhusayithi esemthethweni yeFletcher-Nautisch Kwartier
Phumla kwindlu encinci ene-jacuzzi
Kwindawo ethuleyo nenentle kwindlu entle ene-infrared sauna, indawo yokubasa umlilo kunye nejacuzzi yomntu-2?
Kuyenzeka ukuba uhlala uphumle ngo-de kwikona yangasemva ..
Le yipaki encinci enamakhaya ambalwa, Ezakhiwe ngendlela eqhelekileyo yeAchterhoek enezivalo ezibomvu nezimhlophe.
Amakhaya amaninzi angabhukishwa, kodwa ukuba ujonge ukuhlala ngothando kwezimbini, ke sicebisa indlu yabantu aba-2 kunye nejacuzzi yomntu-2 kwigumbi lokulala eliyintloko, i-sauna kunye nendawo yokubasa umlilo enezihlalo ezibini zothando!
Ezinye izindlu zinebhafu eshushu eyenziwe ngomthi kunye ne-sauna.
Ufuna ukhululeke kangakanani? I-sauna ye-infrared, eziko kunye nejacuzzi, konke kwindawo ethe cwaka neyolisayo. Qhuba ukuthoba isantya iAchterhoek.
Uyilo lwegumbi lehotele kunye nejacuzzi
Inkwenkwezi ezintlanu Ihotele eyiMainport yoyilo ilungele ukuvumela ukuthandana phambili.
Ukuhonjiswa kuyinto entle, Ukuhlaziya kunye nehotele ine spa entle.
Amagumbi ehotele nawo mahle, ngakumbi ukuba ukhetha 'igumbi lehotele kwispa yamanzi'.
Nantsi ijacuzzi enkulu (1.70 m ubukhulu) kanye phambi kwefestile kwaye unembono entle ngakwizibuko elingaphakathi laseRotterdam.
Igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela yokuhlambela kunye ne-sauna yabucala igqibezela amava okuphila kakuhle kweli gumbi lehotele linejacuzzi.
Ingcebiso! Ukuqaqamba embindini weendunduma
I-Fletcher Boutique Ihotele eDuinoord imi kwiindunduma zeWassenaar kwaye kuphela 15 ukuhamba imizuzu ukusuka elunxwemeni.
Fumana umoya womoya omtsha kwaye uhambe emva koko uthathe isihlalo kwelinye lamanxweme olwandle.
Kodwa ungandwendwela indawo yokudlela e-la maphepha yehotele iDuinoord!
Kukwakhona ibha ethambileyo kunye nethala elibanzi elinembono yeendunduma.
Emva kosuku oluhle ungonwaba kwelinye lamagumbi okulala okanye kwigumbi lehotele elinejacuzzi.
Singacebisa isuti yomtshato efanelekileyo kunye nebhafu yanamhlanje.
Ingcebiso! Bhukisha isuti yomtshato efanelekileyo ngewebhusayithi esemthethweni yeFletcher Boutique Hotel Duinoord
Igumbi lasehotele elinamajacuzzi entliziyweni yeThe Hague
Siyacebisa ukuba ungabikho impelaveki edlamkileyo Van der Valk ihotele Nootdorp Vula.
Ihotele ibekwe embindini weHague naseScheveningen.
Kwimizuzu nje elishumi usentliziyweni yeHague.
Ingaphakathi liyabukeka kwaye kukho indawo yokutyela elungileyo kunye nebha enkulu yehotele.
Amagumbi ehotele obutofotofo aneebhedi ezintle kunye negumbi lokuhlambela elinobunewunewu kunye nebhafu enkulu yokuhlambela.
Ixabiso lemali lihle kakhulu. Ngaphantsi kwe- € 100, - Ngaba ungabhukisha igumbi lasehotele elinebhafu yokubhabha?. Le ihotele icetyiswa kakhulu.
Ekhazimlayo kwigumbi leChampagne
Ufuna ukuchitha iintsuku ezimbalwa kunye nomhlobo wakho omthandayo?
Emva koko sinako UVan der Valk Breukelen cebisa!
Apha unokufumana iisuti ezahlukeneyo zokunethezeka kunye nebhafu eshushu yangasese yabucala.
I-champagne kunye neJunior suite ziyacetyiswa kakhulu!
Ukongeza kwigumbi lokuhlambela, igumbi eliphezulu lehotele elinejacuzzi linemvula eshushu kunye nebala elihle.
Kodwa uVan der Valk Breukelen unemimangaliso engakumbi ayigcinele wena; ungazisebenzisa simahla ezinye izibonelelo zempilo ehotele.
Kulungile ukwazi ukuba zombini i-Utrecht kunye neAmsterdam zifikeleleka ngokulula.
Jonga amaxabiso kunye namagumbi ehotele apha
Igumbi lasehotele elinobunewunewu elinejacuzzi kunye nesilingi ekhanyisiweyo
IVan der Valk Ihotele iArnhem Kufuphi neArnhem kunye neVeluwe ikufuphi!
Uyakwazi ukuphumla yokugquma kunye ibhafu Turkish.
Isidlo esisondeleneyo, hlala kwindawo yokutyela e-la.
Kwimozulu entle unokuphumla kwisandi.
Kodwa ngoku intle kakhulu, ubunewunewu 'Glamour Loft'.
ibanzi, Igumbi lakho lokulala 1 ibhedi.
Ukuba ubhukisha 'iLoft', uya kwamkelwa ngamaqamza ekufikeni kwakho.
Wowu! Igumbi lasehotele elinamajacuzzi abanzi
Imizi-mveliso, ubugcisa kwaye yahlukile. Yiyo lento Ubugcisa behotele iInntel Eindhoven, ngokuyinxalenye ibekwe kwisakhiwo esikhulu sePhilips.
Xa umzi-mveliso 1909 yakhiwa, akukho mntu wayenokucinga ukuba esi sakhiwo siza kusebenza njenge-Art Hotel ngaphezulu kwenkulungwane kamva.
Abayili bezakhiwo kunye nabaqulunqi bayiguqulele ihotele iphela yangumsebenzi wobugcisa.
Uziva umzi-mveliso omdala, kodwa zithelekelele ukonwaba kwale mihla kunye nokuphumla. Ubusuku obumbalwa apha buqinisekisiwe ngamava awodwa.
Ingcebiso! Igumbi lasehotele elinamajacuzzi kunye nebhalkoni
I-Fletcher Ihotele-iJagershorst-Eindhoven Yeyona ndawo ifanelekileyo yabathandi bendalo kunye nabo bafuna ukuzola, kodwa i-Eindhoven ikufutshane nayo.
Fumanisa iindawo zolondolozo lwendalo ezingqongileyo, hamba ngebhayisikile kwaye uhambe kuloo ndawo kwaye uchithe imva kwemini uyokuthenga e-Eindhoven.
Emva koko kuyamangalisa ukuza ekhaya kwisuti ye-deluxe kunye nebhedi ebukhulu benkosi, Iflethi yesikrini esineflethi, unomathotholo kunye nomatshini weNespresso.
Igumbi lokuhlambela elinobunewunewu linendawo yokuhlambela entle kunye nejacuzzi ebanzi kwi-balcony. Apha ungabhabha ngoxolo kwaye ubucala ngokupheleleyo!
Iyacetyiswa! Bhukisha isuti etofotofo ngewebhusayithi esemthethweni yeFletcher Jagershorst
Ngakumbi iidilesi ezinejacuzzi kwigumbi lehotele?
Ngaba uyafuna ukusebenzisa i-sauna kunye nejacuzzi ngoxolo kunye ne-sauna ngaphandle kwabanye abantu, Ke idilesi yabucala yempilo entle lukhetho oluhle kakhulu!
Apha uhlala njengesibini kwaye ubumfihlo bakho bunjalo 100% kuqinisekisiwe.
Zidilesi ezilungileyo kakhulu ezincinci, onokuzibekela iiyure ezimbalwa, kodwa kubandakanya ukuhlala ubusuku bonke.
Ezi dilesi zabucala zifumaneka kulo lonke elaseNetherlands.
Jonga ngakumbi Amagumbi eJacuzzi >